Cristiano Ronaldo oo la sheegay in uu ciyaarayo kullanka Manchester United – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeSportsCristiano Ronaldo oo la sheegay in uu ciyaarayo kullanka Manchester United
21/09/2018 Sports 0
Hiiraan Xog, Calaamadda casaanka ah ayaa loo taagay weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo kullankii toddobaadkan ay kooxdiisa lasoo ciyaartay kooxda Valencia.
Arrintaas ayaa dhalisay in la hadal hayo in laacibka Portugues-ka uu seegi doono kullanka uu booqan doono Old Trafford, iyo inuu diyaar u noqon karo.
Weeraryahanka Juve ayaa laga saaray ciyaartii Champions League-ga ugu horreysay ee kooxda reer Taliyaani u safto ka dib markii ay isku dhaceen Jeison Murillo.
Su’aasha ugu badan ee la is weydiinayo ayaa ah inta uu qaadan doono ganaaxa CR7, iyo haddii uu awoodi waayo inuu ku laabto gurigii uu kasoo noqday xiddig sare.
Guddiga Anshaxa ee UEFA ayaa maalinta khamiista ah ee soo aaddan go’aan rasmi ah kasoo saari doona.
Balse markii dib loo daawaday shilkii casaanka uu ku guddoomay Ronaldo waxaa loo arkay inuu keliya hal kullan oo ah kullan Young Boys uu seegi doono.
Sida laga helayo ilo ka tirsan guddiga anshaxa ee UEFA, Ronaldo waxa uu heli doonaa kullanka Manchester United ee Old Trafford 23-ka bisha October ka dhici doono.
Dad ku dhintay dooni ku qalibantay xeebaha dalka Tansaaniya